China PVC nopetahany takela-tariby lasitra tariby ho an'ny indostrialy sy ny fambolena fampiharana Mpanamboatra sy mpamatsy | Pro Fefy
PVC mifono tariby harato dia vita amin'ny tariby vy amin'ny alàlan'ny fizotrany mandeha ho azy sy ny teknika fanamafisam-po be pitsiny. Napetraka mitsivalana sy mitsivalana mba hamoronana rafitra toradroa matanjaka toradroa. Avy eo voafandrika ao anaty plastika plastika PVC. PRO.Fence dia afaka manome azy amin'ny loko isan-karazany fa tsy amin'ny maintso ihany. Ary koa afaka manaparitaka azy ho an'ny firakotra zinc alohan'ny hamonoana PVC mba hampihenana ny harafesina amin'ny toetr'andro mando. Ny fametrahana ny harato mifono PVC dia mora sy mora ny mamita azy, izay mila milina kodiarana fotsiny ary apetaka amin'ny tariby aorian'ny fanosehana ilay pou ho any anaty tany. PVC harato harato dia somary ambany amin'ny vidiny, mahazaka, mahazaka harafesina, ary manana toetra miaro tsara.
PVC harato mifono vy dia ampiasaina betsaka amin'ny indostria sy ny sehatry ny fambolena, fitaterana ary ny fitrandrahana ho an'ny tanjona rehetra toy ny trano akoho amam-borona, fefy mihazakazaka, fitoeran-drano, efijery fanamainana voankazo, fefy.
Savaivony tariby: 2.0-3.0mm
Harato :: 60 * 60, 50 * 50 50 * 100,100 * 100mm
Halavany: 30m amin'ny horonana / 50m ao anaty horonana
Vita: nopetahana PVC (mainty, maintso, mavo)
Ny fomba fanodinana harato mifono vy mifono PVC ary ny fomba fametrahana azy dia mamaritra ny vidiny dia ambany noho ny harato tariby hafa.
2) mahazaka harafesina
Ny harato tariby ao anaty galvanized sy vovoka mifono izay mahatonga ny tontonana hampihena ny harafesina sy ny harafesina amin'ny fampiasana ary maharitra mandritra ny fotoana maharitra.
3) Mivoria mora foana
Ny firafitra tsotra ao anatin'izany ny tontonana harato, ny lahatsoratra iray dia manamboatra azy io ho haingana ary tsy mila fahaiza-manao.
Item TSY: PRO-06 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: M-fefy Galvanized Welded Mesh Fence (Paingotra iray) ho an'ny fambolena masoandro
Manaraka: Trolley tranofiara mavesatra ho an'ny fitaterana sy fitahirizana fitaovana (4 Sided)